Iza amin'ireo fanjakana no tsara indrindra ho an'ireo mitady adrenalinina?
Home » Travel Travel » Iza amin'ireo fanjakana no tsara indrindra ho an'ireo mitady adrenalinina?
Amerika dia toerana misy toerana maro mahavariana raha mitady trangam-panadihadiana ianao, manomboka amin'ny glaciers ka hatrany an'efitra sy ala ka hatrany an-tendrombohitra.
Fa iza amin'ireo fanjakana no manome ny betsaka indrindra ho an'ireo mitady adrenalinina?
Fandinihana vaovao iray no nandahatra ny isam-panjakana amin'ny isan'ny hetsika azo atao amin'ny sokajy folo, manomboka amin'ny fiakarana an-tsampona ka hatramin'ny fanaovana surf, ny fanaovana ski ambony hatrany amin'ny skydiving, hanehoana ny Index 2021 Adventure.
Nivoaka ambony dia lavitra ny fanjakana Golden, California, izay mirehareha amin'ny hetsika fitsangatsanganana maherin'ny 45,000 amin'ny sokajy folo samy hafa, manana safidy maro kokoa ho an'ireo mpihanika rock, manao surf, mitsangantsangana, manidina ary manantona sidina ary mihoatra ny fanjakana hafa.
Misaona ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika noho ny fahalasanan'ny sary fizahantany Gordon 'Butch' Stewart
Ny fihinana eo an-toerana dia ao: 2021 tanàna tsara indrindra ho an'ny locavores voalaza